The “L” word – localisation ဒေသတွင်းအခြေအနေနှင့် လျော်ညီစွာဆောင်ရွက်ခြင်း
Civil Society in Myanmar
Today, the Forum talks with Dr. Win Tun Kyi, the National Office Director of Karuna Mission Social Solidarity (KMSS).
PKF: Dr Win Tun Kyi, you are known asaprominent civil society voice on localisation.
I have been fortunate to participate in some international forums on localisation. KMSS isamember of Caritas International and, asamember of the CI Global Humanitarian Committee, I have followed the work of the Grand Bargain Working groups over the past two years.
PKF: What’s it like being involved at the global level?
The first thing I notice is that we hardly see any “locals” at the global level. If there are no locals in the Working Groups, how is it possible to embrace localised visions and local realities? Since the beginning, most of those involved are internationals. No matter how well-meaning they are, I notice that they simply cannot comprehend local aspirations and local ways of working.
PKF: It is two years since the Grand Bargain and C4C were signed. What progress towards localisation do you see in Myanmar?
I see the same constraints in Myanmar as I observe at the global level. For example, Myanmar was selected asapilot country for the Report Simplification work-stream. This isavery real issue for Myanmar CSOs, yet I do not know of any local leaders or organisations who were consulted in this pilot.
Even when local experience is considered, it can be rather selective. The Grand Bargain states that Pooled Fund mechanisms may be one way to ensure increased local access to funding. Yet the work of this Group drew almost entirely on agencies experience in some African countries, and they found that Pooled Funds are not very successful. In Asia, we have many examples of successful Pooled Funds, but these were not considered.
From our experience,afew organisations are trying to realize this localisation and we appreciate their effort. Clearly localisation can be dis-advantageous to INGOs. After the DfiD reviewer met with partners of their humanitarian facility, we were interested to learn that all the feedback from INGOs was negative, while our own feedback was positive. Meanwhile, other pooled funds are being monopolized by INGOs (the largest Self-Help Group in Myanmar?) wheras this facility is genuinely increasing the funds that go to local CSOs. It is natural that the INGOs will be concerned – and annoyed.
PKF: Clearly, we will not meet the C4C funding target of 20% by May 2018. Do you know if other countries are also struggling, or is localisation slower in Myanmar?
I hear about similar problems in all countries. Localisation is an excellent vision, but global progress is very slow.
One common problem is that localisation has many risks for international agencies. Some become filters that stop information flowing from local voices to donors, or they compete with each other for leadership and pilot funding. I appreciate the risks (especially funding) for international agencies. Perhaps, if I was in their position, I would also be reluctant to participate in the process! But I am sure local organisations would be more open about the risks and seek support to develop new roles as their old ones become redundant.
PKF: The Grand Bargain and C4C are not widely known within Myanmar civil society. Is italack of information or interest or trust that is limiting civil society engagement?
It is mainly because the discussions and working groups and funds for localisation are all being held at suchahigh level. Many CSOs in Myanmar have never even heard of the Grand Bargain or its workstreams. Apart from the facility I have already mentioned, the only real international efforts we have noticed are from Christian Aid, and fromafew of the national staff working for multi-donor funds like LIFT.
At the same time, I know that there would be widespread interest within Myanmar civil society. It is now time for the second wave of “People First” development, and civil society is feeling and expressing this. The localisation process could be very supportive of this change. It is up to those of us who do have information and ideas to share them widely with at the most local level we can.
*C4C and Grand Bargain have been briefly explained in the first ‘localisation’ post on PK Forum.
ယခုတစ်ခေါက်တွင် PK ဖိုရမ်မှ ကရုဏာလူမှုစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအသင်း (မြန်မာ) ၏ဒါရိုက်တာ ဖြစ်သည့် ဒေါက်တာဝင်းထွန်းကြည် နှင့် localisation နှင့် ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းမေးမြန်းဖြစ်ပါသည်။
PKF - ဆရာ့ကို ဒေသတွင်းအခြေအနေနှင့် လျော်ညီစွာဆောင်ရွက်ခြင်း (localisation) ဖော်ဆောင်တဲ့ ဖြစ် စဉ်မှာမြန်မာနုိုင်ငံအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်သိကြတယ်နော်။
ကျွန်တော်က ကံကောင်းစွာပဲ localisation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ နုိုင်ငံတကာဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ ပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကရုဏာလူမှုစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအသင်းက Caritas International (CI) ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်က CI နိုင်ငံတကာလူသားခြင်းစာနာထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာကော်မတီရဲ့ အဖွဲ့ဝင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ Grand Bargain လုပ်ငန်းအဖွဲ့ တွေရဲ့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုတွေကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်ကတည်းက စကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။
PKF - နိုင်ငံတကာမှာ ပါဝင်ခဲ့ရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အတွေ့အကြုံပြောပြပါလား?
ပထဆုံးကျွန်တော်မြင်မိတာကတော့ နိုင်ငံတကာအဆင့်မှာ ဒေသခံတွေကိုတော်တော်တွေ့ရခဲပါတယ်။ လုပ်ငန်းအဖွဲ့တွေမှာ ဒေသခံတွေမပါတော့ ဒေသအခြေပြုမျှော်ရည်ချက်တွေ၊ လက်တွေ့ အခြေအနေ တွေကို ဘယ်လိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနုိုင်မလဲ? ဒီlocalisation ဖြစ်စဉ် အစကစပြီး ပါဝင်နေတဲ့သူ အများစုက နိုင်ငံခြားသားတွေဖြစ်နေတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ဘယ်လောက်ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက် နဲ့လုပ်နေတာဖြစ်ပါစေ ဒေသခံတွေရဲ့ လိုလားချက်တွေ၊ ဒေသတွင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံတွေကို နားမလည်ပေးနိုင်ဘူးလို့ မြင်ပါတယ်။
PKF – Grand Bargain အစီအစဉ်နဲ့ C4C ကတိက၀တ်စာချုပ်ကို သဘောတူလက်မှတ်ရေး ထိုးခဲ့တာ နှစ်နှစ်ရှိပြီနော်။အခုအချိန်ထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း localisation ဆောင်ရွက်တာ တိုးတက်မှုအခြေအနေ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ?
တခြားနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်သလိုပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ပုံစံတူတဲ့အတားအဆီးတွေရှိနေတယ် လို့မြင်တယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံကို အစီရင်ခံစာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပြင်ဆင်နုိုင်ဖို့၊ တင်သွင်းနိုင်ဖို့ စတင်အစမ်းသပ်ခံနိုင်ငံအနေနဲ့ ရွေးခံရတယ်။ ဒါက မြန်မာနုိုင်ငံအရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းတွေ လက်တွေ့ကြုံရမယ့် ကိစ္စရပ်ဖြစ်ပေမယ့် ဒီစမ်းသပ်အဆင့်အတွက် ဘယ်ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်း၊ဘယ်ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်း ခေါင်း ဆောင်ကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့တယ်လုို့ မကြားရဘူး။
တကယ်လို့ ဒေသတွင်းအတွေ့အကြုံတွေကို ယူမယ်ဆိုရင်တောင် ရွေးချယ်ပြီးယူနေတာကို တွေ့ရတယ်။ Grand Bargain အစီအစဉ်အနေနဲ့အလှူရှင်များရဲ့ရံပုံငွေတွေတစ်နေရာတည်း စုပေါင်းစီမံခန့်ခွဲတဲ့ပုံစံ ယန္တယားရှိရင် ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ ရံပုံငွေပိုလက်လှမ်းမှီနိုင် စေမယ်လို့ ပြောတယ်။ သို့သော်လည်း လုပ်ငန်းအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ အာဖရိကက အတွေ့အကြုံ ကိုပဲလုံးဝနီးပါးထည့်သွင်းစဉ်းစားတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့အနေနဲ့ဒီလိုစုပေါင်းစီမံတဲ့စနစ်က မအောင်မြင်ဘူးလို့ သတ်မှတ်ကျတယ်။ အာရှနိုင်ငံများမှာတော့ ရံပုံငွေစုပေါင်းစီမံ တာတွေလုပ်ခဲ့လို့ ရထားတဲ့ အောင်မြင်မှုဥပမာတွေရှိပြီးဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားတာမရှိခဲ့ဘူး။
ကျွန်တော်တို့ အတွေ့အကြုံအရ အဖွဲ့အစည်းအချို့အနည်းငယ်ကတော့ localisation တကယ်ဖြစ်လာအောင် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေတယ်။ အဲဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ကလည်း ကျေးဇူးတင်တယ်။ ဒါပေမယ့် localisation က နုိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက် ပိုအခက်တွေ့စေနိုင်တာလည်း အရှင်းသား တွေ့ရတယ်။ DFID က အကဲဖြတ်သုံးသပ်သူတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ လူသားခြင်းစာနာထောက်ပံ့မှု ရံပုံငွေစီမံခန့်ခွဲတဲ့အဖွဲ့ရဲ့ မိတ်ဖက်တွေ အားလုံးနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာ ထွက်လာတဲ့အဖြေက စိတ်ဝင်စားစရာပဲ INGOs အားလုံးဆီက သုံးသပ်ချက်တွေက အနှုတ် သဘောဆောင်နေတာတွေ့ရပြီး ကျွန်တော်တို့ သုံးသပ်ချက်တွေကတော့ အပြုသဘောဆောင် နေပြန်တယ်။ တကယ်တော့ တခြားနိုင်ငံတကာစုပေါင်းရံပုံငွေတွေကို နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေက (မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အကြီးဆုံး ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးအဖွဲ့တွေလို့ ဆိုနိုင်မလား) အဓိကချုပ်ကိုင်ထားနေချိန်မှာ ဒီအဖွဲ့ကတော့ တကယ့်ကို ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဆီသွားတဲ့ ရံပုံငွေတိုးလာအောင် လုပ်ပေးနေတယ်လို့မြင်တယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်ပြီး ပူပန်မှုရှိတာတော့မဆန်း ဘူးပေါ့။
PKF - အခုအတိုင်းဆို C4Cရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ ရံပုံငွေ ၂၀ရာခိုင်နှုန်း*က မေ ၂၀၁၈မှာ မရောက်ခဲ့ဘူးပေါ့။ တခြားနုိုင်ငံတွေရော ဒီလိုပဲ ရုန်းကန်ရသလား ဒါမှမဟုတ် မြန်မာနုိုင်ငံကို က ပိုနှေးကွေးနေတာလား? (*လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာရံပုံငွေများ၏ အနည်းဆုံး၂၀ရာခိုင် နှုန်းကို ပြည်တွင်း အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများထံ လွှဲပေးခြင်း)
တခြားနုိုင်ငံတွေမှာလည်း ဒီလိုပြသာနာတွေရှိတာကြားမိတယ်။ Localisation က တကယ်တော့ အရမ်း ကောင်းတဲ့ မျှော်ရည်ချက်တစ်ရပ်ပါ။ ဒါပေမယ့် တကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ တိုးတက်မှု နှုန်းကြည့်ရင် အရမ်းနှေးတယ်။
ဖြစ်တတ်တဲ့ ပြသာနာတစ်ခုက localisation က နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက် မလိုလား အပ်တဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖြစ်နိုင်ခြေတွေရှိတယ်။ တချို့က ဒေသခံအသံတွေကို အလှူရှင်တွေမရောက်ခင် သတင်းအချက်အလက်တွေ စစ်ချတဲ့ ကြားခံတစ်ခုလိုဖြစ်လာတယ်။ ဒါမှမဟုတ် သူတို့က ဦးဆောင်မှုနေရာတွေ၊ ရံပုံငွေတွေရဖို့ အတွက် ဒေသခံ အဖွဲ့တွေနဲ့ပြိုင်တယ်။ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့တွေ အတွက် (အထူးသဖြင့် ရံပုံငွေပိုင်းဆိုင်ရာ) အန္တရာယ်ရှိတာကို ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။ သူတို့နေရာမှာ ကျွန်တော်ဆိုလည်း ဒီဖြစ်စဉ်မှာ ပါဝင်ဖို့တွန့်ဆုတ်တာဖြစ်မှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်သေချာပြောနိုင် တာတော့ ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း ဒီလို မလိုလားအပ်တဲ့ဖြစ်နုိုင်ချေတွေအတွက် ဆွေးနွေးဖုို့ လမ်းဖွင့်ထားမှာဘဲ။ အရင်တုန်းက ပုံစံ အခန်း ကဏ္ဍတွေက မလိုတော့ဘူးဆိုတော့ ကဏ္ဍအသစ်တွေဖော်ထုတ် ဖို့ ပံ့ပိုးမှု ပုံစံတစ်မျိုး နဲ့သွားနုိုင်တာပဲ။
PKF – Grand Bargain အစီအစဉ်နဲ့ C4C တို့ကို မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေကြား သိပ်မသိ ကျဘူးလို့မြင်တယ်။ ဒါက အချက်အလက်မရှိလို့လား? ဒါမှမဟုတ် စိတ်ဝင်စားမှု သို့မဟုတ် ယုံကြည်မှုမရှိလို့အခုလို အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်မှု ကန့်သတ်နေရတာလား?
ဒါတွေက အဓိကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ localisationနဲ့ပတ်သက်ြပီး ဆွေးနွေးမှုတွေ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့တွေ၊ ရံပုံငွေတွေက အထက်မှာပဲရှိနေတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံထဲက အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများက Grand Bargain ဒါမှမဟုတ် သူ့အောက်မှာပါတဲ့ ကဏ္ဍတွေအကြောင်း တခါမှမကြားဖူးကျဘူး။ ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ အဖွဲ့အစည်း ကလွဲရင် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းက တကယ်ကို ထဲထဲဝင်ဝင်ကြိုးပမ်းကျတာဆိုလို့ Christian Aid နဲ့ နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းရံပုံငွေအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ LIFT က ပြည်တွင်း ၀န်ထမ်းတစ်ချို့ပဲတွေ့သေးတယ်။
တချိန်ထဲမှာပဲ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေက စိတ်ဝင်စားမှုပိုများလာနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်။ အခုအချိန်က ‘လူထုပထမ’ ဆိုတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းကြောင်း ဒုတိယလှိုင်းအတွက် အချိန်ကောင်းဖြစ်တယ်။ ဒါကို အရပ်ဘက်အဖွဲ့ အစည်းတွေကလည်း ခံစားပြီး ထုတ်ဖော်ပြသနေကျတယ်လို့မြင်တယ်။ Localisation ဖြစ်စဉ်က ဒီအပြောင်းအလဲကို အထောက်အပံ့အရမ်းပေးနိုင်တယ်။ အဓိကကတော့ ဒါနဲ့ဆိုင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ၊ စဉ်းစားချက်တွေ လက်လှမ်းမှီနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ကိုယ့်နိုင်ငံ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန်ရောက်အောင် မျှဝေပေး ဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
*C4C နှင့် Grand Bargain အကြောင်းများကို PK ဖုိုရမ်မှ localisation ပထမဆောင်းပါးအောက်တွင်အတိုချုပ် ဖော်ပြပြီးဖြစ်ပါသည်။
aid in practice